Isboonsar - Eszótár
Ku soo dhowow bogga Qaamuuska Qaamuuska Qaamuuska. Aad baad ugu mahadsantahay booqashadaada. Waxaan jeclaan lahayn inaan si kooban kaaga sheegno waxtarka qaamuusyada Hangari-Ingiriis iyo Ingiriis-Hangari ee Qaamuuska:
- Qaamuusku wuxuu muujinayaa oo keliya tarjumaadda ugu saxsan, markaa uma baahnid inaad kala doorato isku mid ahaanta la bixiyo.
- Qaamuusku wuxuu soo bandhigayaa oo keliya ereyga raadinta, laakiin sidoo kale ereyada ereyga raadinta "ku dhuumanayo". Sidan, uma baahnid inaad qorto weedho dhaadheer, qaamuuska qaamuuska u weyn ka dhigaya barashada luqada iyo ku celcelinta.
- Qaamuuska Ingiriisiga iyo Hangariya waxa ku jira in ka badan boqol oo soo gaabin ah Anglo-Saxon. Tusaale ahaan: NASA
- Qaamuuska Ingiriisiga iyo Hangariya wuxuu si otomaatig ah ugu beddelaa Americanism dhiggooda Ingiriiska. Tusaale ahaan: baasiin
- Haddii ereyga aad raadineyso uusan horey ugu jirin qaamuusku, waxaan ku badaleynaa 24 saac gudahood.